Wararka - Sidel wuxuu bilaabay dhalooyin PET oo aad u fudud!
Xigasho: Hal -abuurka Baako ee PWIF
Sida laga soo xigtay warbaahinta shisheeye, Sidel wuxuu bilaabay X-LITE Weli dhalo biyo ah oo weli khafiif ah, taas oo ah 500ml PET xirmo biyo ah oo aan cadaadis lahayn oo u baahandareeraha dareeraha nitrogen si loo qaabeeyo. Hal -abuuraha ayaa ku andacoonaya in kani yahay dhalada ugu khafiifsan isla cabirka iyo ujeeddada adduunka.
Injineerada X-LITE waxay hagaajiyeen Sidel Super Combi iyo isku-darka tallaabooyinka 5: quudinta hore, afuufidda, calaamadeynta, buuxinta/quudinta madaxa iyo madaxa.
Dhaladaan 6.5g, 195mm waxaa loogu talagalay suuqa biyaha weli ee dhalooyinka yaryar ee PET, daboolkuna waa Novembal Novaqua RightCAP26.
Waxa kale oo ay midaynaysaa StarLITE Weli saldhig u ah hagaajinta xasilloonida iyo iska -caabbinta walaaca, kaas oo lagu dabaqi karo dhammaan aagagga afuufa ee Sidel oo lagu dabaqi karo khadadka wax -soo -saarka jira si loo yareeyo wadarta qiimaha lahaanshaha (TCO).
Khabiirka baakadaha Sidel Laurent Naveau ayaa sheegay in isku -darka baakaddan cusub ee lagu daray ay awood u leedahay inay iska caabiso adeegsiga sumadaha dhalooyinka madhan.
Naveau wuxuu raaciyay: “Naqshaddii hore ee X-LITE iyo naqshadeynta qoorta ayaa wali u keeni karta soo laabasho deg-deg ah maalgashiga macaamiisheena, xitaa haddii beddelka khadka badeecada ay ku jirto xidhmo duritaan oo cusub.”
Ka wareejinta dhalooyinka 12g PET ee 6.5g dhalooyinka X-LITE, waqtiga dib-u-bixinta ee casriyeynta xariiqda alaabada waxay noqon doontaa kaliya laba illaa afar bilood. ”